कथा ‘मोड’ – HostKhabar ::
कति हाइसञ्चोसँग तिमी मलाई प्रतिक्रियावादी भन्छौ । ठीक छ, तर जुन अर्थमा तिमी मलाई प्रतिक्रियावादी भन्छौ, त्यो अर्थमा म प्रतिक्रियावादी होइन । म आफ्नै किसिमको प्रतिक्रियावादी हुँ । मलाई यसमा कत्ति सरम लाग्दैन, अलिकति पनि हीनत्वको भावना ममा आउँदैन । मलाई यसैमा सन्तोष छ । मलाई आत्मसन्तोष हुन्छ, म अन्याय गर्ने सामथ्र्य राख्छु, चाहे त्यो अन्याय आफूभन्दा कमजोर तथा गरिबमाथि नै किन नहोस् । त्यस मानिसको अन्याय पीडित आत्मसमर्पित आँखालाई हेरेर म पनि रमाउन पाउँछु । मानिसले मानिसलाई अन्याय गर्ने सामथ्र्य राख्छ, मलाई त्यसमा सन्तोष छ ।
म अब धनी भैसकेको छु बाबुबाजेले देखेको सपनाभन्दा परको धनी । म तराईको एउटा ठूलो जमिनदार । हजारौं मन धान म लगानी गर्छु, सयकडौं बिघा जमिन मेरो भैसकेको छ । कति झूट, कति जालझेल, कति मुद्दामामिलापछि म यति धनी भएको छु । कति नाङ्गाधाङ्गा मेरा आँखाअघिल्तिर असमयमै सेताम्य भए, कति भोकभोकै मरे, कति झ्यालखानामा सडे । मैले कति पाप गरेर यो कमाएको छु । तर पापलाई तपाईं जुन अर्थमा लिनुहुन्छ, म त्यो अर्थमा लिन्नँ । म त पापलाई शक्ति प्राप्त गर्ने व्यावहारिक प्रक्रिया भन्छु । हो, कहिलेकाहीँ सपनामा जोगी बन्ने प्रयास गरेको देख्छु । तर त्यो सपना मात्रै हो विपनामा त्यसको केही अर्थ छैन ।
राणाशाहीको त्यो जमाना सम्झ न, जुन बखत तिमी जनता भेडा थियौ र शासकहरू ब्वाँसा थिए । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यो कविता सम्झन्छौ रु –‘प्रभुजी, मलाई भेडा बनाऊ ।’ ठीक छ तिमी जनता दुई खुट्टा टेकेकाले मात्रै मान्छे नत्र पशु । यो कुरा त्यस बखत जरसाहेबले घोडाको काठीमा राज भएर मर्जी भएको थियो ।
२००७ सालको क्रान्तिको बखतमा तिमी सानै थियौ क्यारे । त्यसो भए राणाशाहीको जमानाको मर्म तिमीलाई बुझ्न गाह्रै पर्ला । त्यसो भए कल्पना गर । सहरमा पहिले अहिलेजस्तो मोटर चल्दैनथ्यो । एक–दुईवटा कहिलेकाहीँ दौडेको देखिएको थियो । आँखा चिम्लेर दर्शन गर्न सक्छौ । त्यो मोटरमा आवश्यमेव जन्मजात मालिक विराजमान भैबक्सेको हुन्थ्यो ।
फेरि बिहान अथवा साँझ मालिक घोडा चढेर सवारी हन्छ । चाकडीबाजको बथान साइकल अथवा घोडा चढेर पछि लागेको हुन्छ । तिमी जनतालाई दर्शन फर्काउँदै उहाँ सवारी हुन्छ । तिमी जनता बाटोमा, घरघरमा झिँगा भन्केजस्तै भन्केका हुन्छौ । गुहु–मूत, नाल र रछ्यानमा हुर्केका तिमी जनता झिँगै त हौ । लौ त चाकरी नगरी राम्ररी बाँच त, सुरक्षित भएर बाँच त १ जागिरदार त परै जावस् तिमी साहू–महाजन भए पनि कुनै राणा मालिकको चाकरी गर्नै पर्छ, चाहे त्यो चाकरी बैठकेको गरेर अप्रत्यक्षरुपमै किन नहोस् ।
त्यस्तै वातावरणमा जन्मेको र हुर्केको हुँ । मेरो बाबु त्यही वातावरणमा हुर्कनुभयो, मेरो बाजे पनि । मेरो बाबुको अनुहारको कल्पना गर । त्यो थिचिएको छ, किचिएको अनुहार, त्यसमा विद्रोहको लेश मात्र पनि छैन । त्यो अनुहार बाँचेको छ, बरु त्यति मात्र किनभने मेरो बाबुको अझै शारीरिक मृत्यु भएको छैन । तलबबाहेक कतैबाट पान–सुपारीको रुपमा केही पाए पनि उहाँको आँखा चम्कँदैन, झन् निस्तेज हुन्छ । त्यस कारणले होला जतिसुकै नयाँ लुगा र कोट भए पनि उहाँको शरीरमा पर्नासाथ मैलो र पुरानो देखिने र टोपीमा भएको ब्याज निष्प्राण देखिने । धेरै वर्ष घिस्ता–घिस्ता मेरो बा चार भाग ऐन र स्वीकृत स्याहास्रेस्ताबमोजिमको काम गर्न सिपालु हुनुभयो । त्यो भन्दा पनि उहाँको शरीर हुकुम तामिल गर्ने यन्त्र बनिसकेको थियो । त्यसकारण उहाँ चन्द्र शमशेरको पालामा ११ रुपिएँ नौसिन्दा जागिर खाई जुद्ध शमशेरको पालामा ५० रुपिएँ डिठ्ठासम्म हुनुभयो ।
उहाँ अड्डा जानुहुन्छ, मसी पोखिएर टाटैटाटा परेको सुकुलमा बस्नुहुन्छ र पोकापन्तराहरूबाट कागज झिकेर कराएर पाठ गर्नुहुन्छ र कागज घुँडामा अड्याएर बाँसको कलमले लेख्नुहुन्छ । केहीबेर भित्तामा उप्केको लिउन र सही पुछेको विभिन्न औंलाका डामहरूलाई हेरेर शोचमग्न हुनुहुन्छ । बालिस्टमा अडेस लगाएर घुर्न लागेको हाकिमकहाँ पुग्नुहुन्छ र आज्ञालाई शीरोपर गरेर फर्कनुहुन्छ । कुनै किसिमको उच्चाभिलाषा नराखी घरमा बस्नुहुन्छ र हामीलाई एक पेट ख्वाउनुहुन्छ ।
म मेरो बाबुको उत्तराधिकारी । मैले अज्ञात किसिमले सोचेको थिएँ हुँला, मैले पनि मेरो बाजस्तै हुनुपर्छ । म स्रेस्ता पाठशालामा भर्ना हुन ठीक भैसकेको थिएँ । तर मेरो मामाले अङ्ग्रेजी पढेकाको कदर हुने समय आयो भनेर अङ्ग्रेजी स्कुलमा भर्ना गरिदिनुभयो । मेरो बाले यसबाट विशेषरूपमा फरक पर्ने नदेखेर सम्मति दिनुभयो ।
म सानै क्लासमा भर्ना भएँ । म अटूट किसिमले दिनका दिन स्कुल जान थालेँ, नत्र पहिले दिनभरि टोलमा गुच्चा खेलिरहन्थेँ र झगडा गरिरहन्थेँ । म स्कुलमा फस्ट, सेकेन्ड हुन नसके तापनि राम्रै किसिमको विद्यार्थी थिएँ । म दिनदिनै पाठ पढ्थेँ र पाठ सुनाउँथे । सालसालै क्लास चढ्दै गएँ र फोर्थ क्लाससम्म पुगेँ । मेरो अर्को गुण थियो, खेलाडी । जुनसुकै खेल पनि म राम्ररी खेल्थँे । गुच्चाको खेल, एक औंलाले सिसाकलम भाँच्ने खेलदेखिन् लिएर फुटबलको समेत राम्रो खेलाडी । त्यसकारण बाबुको ठीक उल्टो मेरो शरीर बलियो र सुगठित थियो । क्लासका लड्काहरू मसँग झगडा गर्न डराउँथे । म पनि झगडा गर्ने निहुँ झिक्तिनथेँ । एक किसिमले मलाई मन पराउनेहरू धेरै थिए । मास्टरहरूको कृपादृष्टि ममा थियो र म उहाँहरूलाई श्रद्धाभक्तिले हेर्थें । कति थाहा नभएका कुराहरू म उहाँहरूबाट सिक्तैछु । कति रहस्यहरू उहाँहरू मलाई उदाङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ । हेडमास्टरलाई त सर्वशक्तिमान् देउतासमान सम्झन्थेँ । फुटबलको च्याम्पियन हुँदै आइरहेको थिएँ । त्यसकारण साना क्लासदेखिन् लिएर ठूला क्लासका लड्काहरूले समेत मलाई चिनेका थिए । म एक किसिमले स्कुलको हिरो जस्तै भैसकेको थिएँ । घरमा पनि मेरो इज्जत थियो । बाबुआमा मप्रति आशावादी थिए र भाइबहिनीहरू मलाई माया गर्थे ।
फुटबल मलाई गोलाकारको एउटा जिउँदो प्राणीजस्तै लाग्थ्यो । त्यो उफ्रन्छ, त्यो गुट्कन्छ, त्यो चलबलाउँछ, खुट्टामा आएर लडीबुडी खेल्छ र हुत्तिएर जान्छ, फेरि अचानक आकाशिन्छ । त्यसको चिल्लो स्पर्शले शरीरमा रोमाञ्च पैदा गर्छ । त्यसको गन्ध सुँघिरहुँजस्तो लाग्छ र त्यसलाई पेनाल्टी अथवा ह्यान्डको सुट हिर्काउन म आएर भुइँमा रोक्न लाग्दा अचानक गालामा जोड्न मन लाग्छ । बलसँगसँगै दौडँदा जीवनप्रति आस्था र श्रद्धा पैदा हुन्छ । एक सन्तुलित उच्चाकाड्क्षा मनमा जागृत हुन्छ । बल र ममा यस्तो माया–ममता बसिसकेको थियो, बल मेरो इच्छाबमोजिम दौडन्थ्यो र म पनि बलको पछि दौडन्थेँ । कहिलेकाहीँ बल सायद मेरो मायाको बोझ खप्न नसकेर विद्रोह गथ्र्यो र विपक्षीको खुट्टामा गएर समाउँथ्यो । मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो । मलाई त्यसले जिस्क्याएजस्तो लाग्थ्यो । मलाई एक किसिमको डाहा लाग्थ्यो । तर जसरी भए पनि बललाई म आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउँथेँ । म फुटबल खेलको हरेक पोजिसन खेल्न सिपालु थिएँ । सेन्टर फरवार्डमा र सेन्टर ब्याकमा त म कमाल थिएँ । मेरो दुवै खुट्टा रामो चल्थ्यो, लेफ्ट–राइट दुवै । म हेड गरेर गोल राम्रोसित पार्थें । मेरो सुट ग्रास कटर थियो र ड्रपकिक पनि सफासँग हिर्काउँथेँ । अनि ठूलोमाको भए मपनि लिगको म्याचमा समेत छानिन्थँे हुँला ।
त्यो स्कूल हो । नाइन क्लासदेखिन् फस्ट क्लाससम्म एक हजारजति लड्का थिए, विभिन्न अनुहारका र विभिन्न स्वभावका । मेरो आफ्नै किसिमको स्वभाव थियो । मलाई कोही–कोही घमण्डी भन्थे । त्यसलाई घमण्ड नभनेर अर्कै केही भन्न सुहाउला । पढाइमा म कमजोर थिइनँ, स्वास्थ्य मेरो राम्रो थियो र खेलाडी त म हुँदैहुँ । यसकारण त्यस्तो स्वभाव हुनु अस्वाभाविक होइन । म यत्तिको उत्साही थिएँ, मेरो स्वभाव मन नपराउने मानिसपट्टि मेरो विशेष ध्यान जाँदैनथ्यो । हो, एउटा लड्का जो अनुहार हेर्दै बाबुसाहेब थियो ऊ मेरो मुखै हेर्दैनथ्यो । उसको अनुहारबाट छर्लङ्ग हुन्थ्यो, मलाई मन पराउँदैन भन्ने । ऊ मोटरबाट ओर्लेको र आठपहरियाले क्लासको ढोकासम्म बोकेर ल्याएर थमाएको किताब लिएर भित्र पसेको म देख्थेँ । अरु पनि धेरै बाबुसाहेब स्कुल आउँथे । तर यो बाबुसाहेब विशेष बाबुसाहेब हो भन्ने कुरा अरुअरु बाबुसाहेब र मास्टरहरुसमेत उसको अघिल्तिर हच्कनेबाट थाहा हुन्थ्यो । ऊ मभन्दा एक क्लास माथि थियो । तर माथिल्लो क्लासको भए तापनि अरु बाबुसाहेबले मलाई चिनेजस्तो गर्थे, तर ऊ मेरो मुखसमेत हेर्दैनथ्यो । ऊ त्यसबखतको श्री ३ महाराजको नाति र रोलवाला जर्नेलको छोरो हो उसमा त्यस्तो स्वभाव हुनु अस्वाभाविक होइन भन्ने हामीले मानेका थियौं । हरेकको आफ्नोआफ्नो स्थान हुन्छ । हरेकको आफ्नोआफ्नो अवस्था हुन्छ । त्यो हटाएर हट्दैन, मेटेर मेटिँदैन भन्ने परम्परागत दर्शनलाई हामीले बिनाशिक्षा नै अनुभव गरिसकेका थियौं ।
स्कुलको दिन स्वाभाविक किसिमले गुट्किरहेको थियो । स्कुल गयो, पढयो ,साथीहरुसँग ठट्टा ग¥यो, कहिलेकाहीँ मामुली किसिमको झगडा ग¥यो र फक्र्यो र अनि साँझ टुँडिखेलमा फुटबल खेल्न गयो । अनि फर्कियो र बाबुआमाको मायाममताको ओतमा सुत्यो । मानसिक पीडा र नैराश्यको लेश मात्र पनि थिएन र त्यसको कल्पनासमेत थिएन । तर त्यो आउँदो रहेछ आकस्मिक घटनाको रुपमा र त्यसले जीवनमा अर्कै मोड ल्याइदिन्छ र त्यसको चोट जीवनपर्यन्त रहिरहन्छ ।
फुटबलको म्याचको सिजन थियो । म सपनासमेत फुटबल खेलेको देख्न थालेँ । घरमा आमालाई खेलेको मन पर्दैनथ्यो, भन्नुहुन्थ्यो– “नखेल् दुब्लाइसकिस् । थपक्क पढेर बसे त भैहाल्यो ।” बा भन्नुहुन्थ्यो– “पढ्न–सढ्न पर्दैन्, खेली मात्र रह ।” एक क्लासले अर्को क्लासलाई च्यालेन्ज दिइरहेको थियो, एक स्कुलले अर्को स्कुललाई । टुँडिखेल र छाउनीमा दिनदिनै भनेजस्तो म्याच चलिरहेको थियो । हेर्न आउनेको हूल हुन्थ्यो । हेडमास्टरलगायत हाम्रा मास्टरले खेलमा रुचि लिन लागे । हुँदाहुँदा संस्कृत, पढाउने पण्डितसमेत उत्साहित हुनुभयो । क्लासमा मास्टर पस्नुअघि खेलैको चर्चा चलिरहन्थ्यो र म पनि कुराको विषय भएको महसुस गर्थें ।
हाम्रो फोर्थ क्लासले थर्ड क्लासलाई च्यालेन्ज दियो । च्यालेन्ज स्वीकृत भयो र खेल्ने दिन पनि निर्णीत भयो, भोलि खेल्ने । आजको राति मताई धेरैबेरसम्म निद्रा परेन । फुटबल उफ्रेको र म फुटबलसँगसँगै हावामा उडेको तराना लागिरहेको थियो । स्कुलमा हाफ टाइम सिद्धिनासाथ मेरो मुटु ढुक्ढुक गर्न लाग्यो । चार बज्यो, घन्टी बज्यो । सबै आआफ्ना घर लागे । म पनि हड्बडाउँदै घर पुगँे र झटपट खानेकुरा खाई टुँडिखेल, ग्राउन्डमा दाखिल भएँ । सबै लड्काहरु जम्मा हुँदै थिए । चारैतिर हेरेँ । स्कुलका लडकाबाहेक बाहिरका मानिसहरू पनि जम्मा भएका थिए । एकातिर मास्टरहरू थुप्रिएर बसेका देखेँ । हेडमास्टरसमेत आउनुभएको देखेर अलि लाज लाग्यो ।
मैले लुगा फुकालेँ, भित्र गन्जी र कट्टु थियो । सारा क्लासका केटाहरु मलाई घेरेर उभिरहेका थिए । म ग्राउन्डमा उत्रेँ । एक–दुईचोटी गोल–पोस्टमा बल हिर्काएँ । हाम्रो गोलकिपर नामुद थियो । उसले आफ्नो करामत देखायो र बल रोक्यो । सिटी बज्यो । हामीतिरका एघारै जना आफ्ना–आफ्ना पोजिसनमा उभिन गए । म सेन्टर फरवार्ड थिएँ । पोजिसन लिएका विपक्षीतिर सरसर्ती निगाहा दौडाएँ । रामकृष्ण सेन्टर फरवार्ड थियो, ऊ मलाई हेरेर मुस्कुरायो तर म मुस्कुराउन सकिनँ । अचानक म आशङ्कित भएँ, उसको ठीक पछिल्तिर त्यही श्री ३ महाराजको नाति बाबुसाहेब थियो । ऊ मलाई हेरिरहेको थियो । मैले अर्कैतिर हेरेँ । म पहिले नै उसको दृष्टिले गल्न चाहन्नथेँ । दर्शकहरुतिर मैले हेरेँ । दर्शकहरुको भीड चारैतिर फैलिएको भित्ताजस्तो लाग्यो । मास्टरबाहेक अरुतिर हेरेँ । उहाँहरु अलि पर हटेर थुप्रिएर गफमा मसगूल हुनुहुन्थ्यो । मलाई किन सहारा चाहियो मैले मनमनै भनेँ, मैले खुट्टालाई जबर गरेर भुइँमा उठाएँ र छाती फर्काएर उभिएँ । रेफ्रीले मोहर झिकेर टस ग¥यो । हिर्काएर सुरुआत गर्ने हाम्रो पालो भयो । सिटी बज्यो । मैले नजिकैको राइट इनलाई पास दिनको सट्टा जोडसँग हिर्काएर लेफ्ट आउटलाई दिएँ । लेफ्टले केही क्यारी गरेर एकदम राइट आउटलाई दियो । राइट आउटले मलाई पास दियो । मैले राइट इनलाई दिएँ । राइट इनले क्यारी ग¥यो र फेरि मलाई पास दियो । विपक्षीले अहिलेसम्म बल छुन पाएकै थिएन । मैले फेरि लेफ्ट आउटलाई दिएँ । लेफ्ट आउटले एकदम हाई हिर्काएर पेनाल्टी एरियामा बल पु¥यायो । बल एक क्षण आकाशमा नाचिरहेको मैले देखेँ । केही क्षण म पनि मन्त्रमुग्ध भएँ हुँला । मेरो विचारमा एक हल्का स्पर्श भयो । त्यही मुग्ध अवस्थामा मैले टाउको केही हल्लाएँ । तर म एकदम पछारिएँ । कसैले खुट्टामा लात हिर्काएको रहेछ । तर त्यसबेला लामो सिटी बजिसकेको थियो । चारैतिरबाट ‘गोल गोल’ र थपडी बजेको आवाज आयो । पछारिएकै स्थितिमा हावामा टोपी उफ्रेको देखेँ, म उठेँ । ‘क्याबात चन्द्र’, मेरो कानमा गुञ्ज्यो । मलाई कहिलेकाहीँ आश्चर्य हुन्छ । मैले त्यसै हिर्काएजस्तो लाग्छ र बल कसरी ठीक ठाउँमा पुग्छ, मैले त बल यन्त्रवत् छोएको हो, तैपनि बल मेरो अवचेतन मनको कुरा बुझेर त्यही ठाउँमा पुग्छ, जुन ठाउँमा पुग्दा म लामो सास फेर्छु ।
गोल भयो । विपक्षीले बललाई छुनै पाएको थिएन, गोल भइहाल्यो । हामीहरू फेरि आफ्नो–आफ्नो पोजिसन लिन पुग्यौं । अहिले विपक्षी त्यही बाबुसाहेबसँग मेरो आँखा जुध्न पुग्यो । मलाई त्यो आँखा एकदम हिंस्रकजस्तो लाग्यो । म यति उत्तेजित भैसकेको थिएँ वा मैले त्यो आँखालाई बेवास्ता गरेँ । सिटी बज्यो, अहिले मैले लेफ्ट इनलाई दिएँ । लेफ्ट इनले फेरि मलाई दिन खोज्यो, तर बल विपक्षीको फरवार्डले समात्यो र क्यारी ग¥यो । हाम्रो राइट हाफ ब्याकले बल खोस्यो र मलाई दियो, मैले क्यारी गरेँ । बाबुसाहेबको सामना भयो । मैले उसलाई छलेँ । बाबुसाहेव चुरिएर मलाई लखेटिरहेको थियो । म सतर्क थिएँ । मलाई मनको कुनाबाट कसैले भनिरहेको थियो, योदेखि होश राख् । तर फल मलाई उस्तो लाग्दैन । सानोतिनो फलले मलाई केही हुँदैन । मैले मनमनै भनेँ । मलाई केको डर १ अब खेल उत्तेजनापूर्ण हुँदै आइरहेको थियो । बल कहिले हाम्रो गोल पोस्टनिरसम्म पुगेर फर्कन्थ्यो, कहिले विपक्षीको गोल पोस्टसम्म पुग्थ्यो र फेरि फर्कन्थ्यो । बल हामी दुवै पक्षलाई जिस्क्याइरहेको थियो । हाफ टाइम भयो । एक गोलले हामीले जितेकै थियौं ।
फेरि सिटी बज्यो । हामीले पोजिसन लियौं । खेल सुरु भयो । हाम्रो विपक्षी अब अफेन्स खेल्न लागे । बाबुसाहेब आफैं हाम्रो गोल पोस्टसम्म पुग्थ्यो । बाबुसाहेब झन्–भन् रिसाएको थाहा हुन्थ्यो । तर बलले हामीतिर गोल हुन मानेको थिएन । या त आउट हुन्थ्यो, या त हाम्रो गोलकिपर रोकिहाल्थ्यो । बल मेरो खुट्टामा आएर अल्झियो । मैले क्यारी गरेँ । बाबुसाहेबलाई छलेँ र लेफ्ट आउटलाई दिएँ । लेफ्ट आउटले मलाई दियो । क्यारी गर्न लागेको थिएँ, म अचानक हुत्तिएर पछारिएँ । दर्शकहरु ‘फल फल’ कराउन लागे । फलको सिटी पनि बज्यो । बाबुसाहेबले मलाई गर्धन तन्काएर हेर्यो । मैले बललाई सञ्चो किसिमले भुइँमा राखेँ र सुट हिर्काएँ । बल ढुन्मुनिँदै गयो, तर आउट भयो । बल गोल हुन नमाने पनि मलाई सन्तोष भयो । सारा खुट्टामा केन्द्रिभूत भएको सारा रिस हलुङ्गो भयो । ‘ठीक छ’ मैले भनेँ । टाइम धेरै छैन, एक गोल हामीले जितकै छौं ।
खेल झन्–झन् जोसिलो हुँदै आयो । हेर्ने मानिसहरू अधैर्य भएर चिच्च्याउन लागे । बल मेरो खुट्टामा पथ्र्यो, उता जान्थ्यो, यता आउँथ्यो फेरि गोलकिपरले रोक्थ्यो । समय बित्न लाग्यो, तर बल कुनै निर्णय नगरी यता र उता गरी नै रहेको थियो । अचानक बाबुसाहेवले क्यारी गर्यो । ऊ सबैलाई छल्दै बललाई क्यारी गरी एक्लै हाम्रो गोल पोस्टनिरसम्म पुगिसकेको थियो । बल पूरा उसको नियन्त्रणमा परेको मलाई लाग्यो । तर कुन बेला कसरी म त्यहाँ पुगेँ मलाई होश छैन । म पुगिसकेको रहेछु र बाबुसाहेब एकातिर चित्ता खाइसकेको रहेछ । फलको सिटी बज्यो । म चकित भएँ । जानाजान फल हिर्काएजस्तो मलाई लाग्दैन ।
जोशमा बल खोस्न खोज्दा सायद फल पर्न गयो । हुन सक्छ, मेरो अवचेतन मनमा बदला लिने प्रवृत्ति थियो । तर आश्चर्य लाग्यो मबाट फल कसरी हुन गयो १ बाबुसाहेब बिस्तारै उठ्यो र मनिर आइपुग्यो । मैले आफूलाई बचाउन हट्नुभन्दा पहिले नै बाबुसाहेबको ममाथि मुक्काको प्रहार पर्यो । केही क्षणमा म फेरि जिल्ल परेँ र ममाथि दनादन मुक्काको प्रहार परिरह्यो । अचानक मलाई लाग्यो, खेल एकदम सामसुम भयो र म त्यो भीडमा एक्लै छु । मभित्र सुरक्षाको पे्ररणा जाग्यो । मैले आफूलाई बचाउन खोजेँ र बचाउन खोज्दाखोज्दै मैले पनि एक–दुई मुक्काको प्रहार गरेँ । अचानक मैले आठपहरियाको अनुहार देखेँ अनि टाउकामाथि केही कुराले किचेजस्तो लाग्यो । म पछारिएँ । म निसास्सिइरहेको थिएँ र आठपहरियाको लात र मुक्काको प्रहार ममाथि बर्सिरहेको थियो । मैले ग्राउन्डको घाँसलाई मुट्ठी कसेर समातेँ मानौं, मेरो अर्को कुनै सहारा छैन । मैले आँखा चिम्लेँ । सारा शरीर र सारा मन एकदम सामसुम भयो । सायद केही बेरम बेहोश भएछु ।
मैले आँखा खोलेँ । केही केटा मलाई घेरा लगाएर उभिरहेका थिए । आठपहरिया एकातिर उभिएर वक्किरहेको थियो– “तेरो ज्यान लिन्थेँ म, बचिस्, कुटाइ मात्र खाइस् ।” बाबुसाहेब मोटरमा बसिसकेको थियो– मैले फेरि सहारा खोजेँ र चारैतिर हेरेँ । मलाई सहानुभूति गर्नेहरूसमेत सबै पक्क परेर बसिरहेका थिए । मेरो आँखाले हेडमास्टरलाई खोज्यो, मास्टरहरूलाई खोज्यो, तर उहाँहरु कतै देखिनुभएन ।
म बल्लतल्ल उठेँ र लुगा लगाएँ । म्याचसँग मेरो के सम्बन्ध छ अब । एकजनाले सोध्यो– “तिमीले फल हिर्काएको हो ?”
मैले खालि उसको अनुहार मात्र हेरेँ, जबाफ दिइनँ ।
“बाबुसाहेबलाई कुट्नु हुन्थ्यो तैले ?” मलाई अर्कोले सोध्यो । म चुप थिएँ, मेरो बोल्ने शक्ति थिएन । मेरो जीउ दुखिरहेको थियो र दुखाइसँगसँगै मभित्र अन्धकारपूर्ण निराशा व्याप्त हुँदै आइरहेको थियो । म कोहीसँग बोल्दै नबोली घरतिर लागेँ । साथमा मेरा मिल्ने साथी चार जना थिए ।
“त्यो आठपहरियाले तिमीलाई कुट्नु हुन्थ्यो रु त्यसलाई के वास्ता १” यसको जबाफ कसले दिने रु
“तिमीले बाुबुसाहेबलाई हात छोड्न नहुने, ऊ राणाजीको बच्चो !” हो, ऊ राणाजीको बच्चो, उसले जतिसुकै कुटे पनि सहनुपर्छ र बचावटका लागि पनि हात छोड्नु हुँदैन । यो ठूलो अपराध, यो सबै हामीलाई सानैदेखि कसैले नभने पनि थाहा छ । तर अहिले यसको जबाफ खोइ ?
“मास्टरसाहेबहरू छँदाछँदै पनि त्यो आठपहरियाले हामी केटाकेटीलाई कुट्न नहुने १ त्यो को हो र, आठपहरिया त हो नि । त्यो आठपहरियालाई कुट्न हुल्याहा केटाकेटीको पनि साहस आएन ।”
सबै चुपचाप भएर हिँडिरहेका थियौं । प्रश्नको जबाफ बाटोमा हिँड्ने अरू बटुवाले के देलान् रु सबैको आफ्नो स्वार्थ छ ।
मास्टरसाहेबहरू त कस्तरी भाग्या !
अहिले मलाई हाँसो उठ्यो । म घर पुगेँ र कोठामा गएर लम्पसार परेर पल्टेँ ।
भोलिपल्ट म स्कुल गइनँ । मलाई लाग्यो स्कुलमा कोही पनि छैन आफ्नो भन्नुपर्ने । मलाई मास्टरहरूप्रति र सम्पूर्ण स्कुलप्रति नै सरम लाग्यो । मानिस कति असहाय छन् । यी शिक्षा–दीक्षा, यी पुस्तकका ठूला–ठूला कुराहरु पनि कति साना छन्, त्यो आठपहरियाको सामुन्ने ।
म साँझ कोठामा पल्टिरहेको थिएँ । सायद म पर्खिरहेको थिएँ, कुनै अर्को घटनाको निम्ति । बा बडबडाउँदै भ¥याङ चढेको मैले सुनेँ । “चन्द्रे–चन्द्रे ! खोइ त्यो चन्द्रे ?” बा कराइरहनुभएको थियो । एक असहाय अपराधी भएर म बसेँ । म बोलिनँ । बा कोठाभित्र पस्नुभयो ।
बा कराउनुभयो– “तेरियामा बदमास ! तेरियामा गधा ! खेल्ने नगर् भनेको होइन, थपक्क पढेर बसे त पुगिहाल्यो । बड तँ जर्नेलको छोरालाई हातपात गर्ने भएको ।”
बा पनि त्यतिसम्म निर्दयी हुनुहोला भन्ने मलाई थाहा थिएन । अर्को आश्चर्य केही ममाथि बज्य्रो । टाउकोमा हात पुर्याउनुभन्दा पहिले नै बाले मलाइ– ‘ला,ला’ भन्दै कुट्नुभयो त्यही दुःखेको ठाउँमा जहाँ आठपहरियाको मार परेको थियो । मैले सुस्केरा हालेँ र म रुन सकिनँ ।
“को त्यो थाहा छ तँलाई रु मूर्ख १ त्यो रोलवाल जर्नेलको छोरो, त्यो महाराजको नाति ।”
“त्यसले मलाई कुट्यो ।” मैले झिनो स्वरमा भनेँ ।
“तेरियामा बेबकुफ मूर्ख ! तँ त्यो भएको ठाउँमा पुगिस् किन रु” बा फेरि अघिल्तिर बढ्नुभयो कुट्न भनेर । मैले अहिले टाउकोमा हात पुर्याएँ । त्यसै बखत आमा पस्नुभयो र सोध्नुभयो– “किन, के ?” भनेर ।
“तँलाई थाहा छैन ? आमा भएकी !” बाले आमातिर हेर्नुभयो । बाले मतिर फर्केर अहिले अलि कोमल स्वरमा भन्नुभयो– त्यो को थाहा छैन तँलाई रु त्यसले जतिसुकै कुटे पनि सहनु पर्दैनथ्यो ? आठपहरियाको चुटाइ खाइस्, अझ पुगेन ! बुझिस् तैंले त्यति गरेकोले मेरो जागिर जान्छ ।”
आमा स्तम्भित हुनुभयो र विस्फारित नेत्रले बाको अनुहार हेर्न लाग्नुभयो ।
भोलिपल्ट पनि म स्कुल गइनँ, पर्सिपल्ट पनि गइनँ र पछि जाँदै गइनँ । मैले पढ्न छोडेँ । म हेडमास्टर र अरू मास्टरलाई कति श्रद्धाले हेथेँ । म हेडमास्टरलाई कति शक्तिशाली सम्झन्थेँ र आफैं गोरवान्वित हुन्थेँ । म पुस्तकलाई श्रद्धाले ढोगिदिन्थेँ । अब मभित्र कसैप्रति श्रद्धा भएन, कसैलाई देखेर गौरवान्वित हुने कारण भएन । मैले पढ्न छोडेँ । केही दिन टोलमा अन्यमनस्क हुल्याहा भएर दिन बिताएँ र एकदिन अकस्मात् भागेँ र घुम्दै–घुम्दै तराई पुगेँ ।
तराईमा के गरेँ, कसो गरेँ लामो इतिहास छ । अब जे छु, म त्यही छु र तिमीहरुको सामुन्ने छु । एक प्रतिक्रियावादी छु । २००७ सालको क्रान्तिपछि कति किसिमको सरकार, धेरै किसिमका नारा लिएर खडा भए । तर मेरो अन्याय गर्ने र जालझेल गर्ने सामथ्र्य घटेको छैन र विभिन्न रुपमा त्यो कायमै छ । राणाशाहीको प्रतिक्रिया पनि राणाशाहीको अवशेष हो । मेरो मृत्युसँगसँगै राणाशाहीको अवशेषको मृत्यु हुन्छ । तर म गिज्याएर भन्छु त्यो हुँदैन ।
१२ खरी डटकम